बालकथाः कोरोना भाईरस | eAdarsha.com
बालकथाः कोरोना भाईरस
नमस्कार, मेरो नाम कोरोना हो । म भाईरस हुँ । मलाई घुम्न मन पर्छ । म जहाजमा उड्न रमाउँछु । देशको सिमा क्षेत्रहरु पार गरेर अर्को देशमा प्रबेश गर्न मर्न लाग्छ। त्यसैले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा, एक गाउँवाट अर्को गाउँमा, एक शहरवाट अर्को शहरमा घुम्न मन लाग्छ । एक देशवाट अर्को देश घुम्न औधी मन पर्छ ।
म चिनको हुवाङ्ग प्रान्तमा जन्मेको हुँ । चिनमा धेरै घुम्ने अवसर मैले पाइन् । मान्छेहरु लकडाउन गरेर बसे । त्यस पछि म इरान हुदै युरोप देश छिरेको थिए र अहिले अमेरिका । हाल सम्म म बिश्वका प्राय सबै देशहरु भ्रमण गरिसकेको छु । प्रायजसो म हातवाट, रुवा, खोकीका छिटाहरुवाट एक वाट अर्कोमा सर्ने गर्दछु । त्यसैले मलाई हाई फाइब गरेको असाध्यै मन पर्छ ।
मेरोवारेमा तिमीहरुले सुनेका छौ होला । मेरो नाम सुन्दा तिमीहरुलाई मनमा कस्तो महसुस हुन्छ ? म बुझ्न सक्छु तिमीहरुलाई डर, अन्योल, चिन्तित, दुखी, जिज्ञासु यस्तै यस्तै वनाईरहेको होला । तिमीहरुलाई मात्र होइन तिम्रो बुवा, आमा, दिदी, दाईहरुलाई पनि यस्तै भईरहेको हुन सक्छ जसले मेरोवारेमा धेरै समाचार र सुचनाहरु हेरिरहन्छन् ।
म आज तिमीलाई मेरो वारेमा भन्न गईरहेकाे छु । मैले केही कुरा भने पछि तिमीले मेरो वारेमा बुझ्नेछौं । जव म घुम्न निस्किन्छु तब मसंग श्वास फेर्ने नसक्ने, रुगा लाग्ने, १०४ डिग्री भन्दा बढी लगातार जोरो आईरहने लक्षणहरु लिएर आउँछु । रुवा लाग्दा, हाच्छु गर्दा मलाई अर्को व्यक्तिमा जान मन पर्छ । तर म धेरै समयसम्म व्यक्तिको शरीरमा बस्न सक्दिन । व्यक्तिले समयमा हेरचाह र उपचार गर्यो भने म मरिहल्छु ।
म तिम्रो शरीरमा आउँछु की भनेर तिमीलाई चिन्ता लागेको होला । चिन्ता लाग्नु सामान्य हो । तर तिमीलाई तिम्रो आमा, बुवा, दिदी, दाईले सुरक्षित गर्नुहुन्छ ।
मलाई आउन नदिन तिमीले विहान, दिउसो, साँझ खाना खाने समयमा राम्ररी सावुन पानीले हात धोयौं भने म तिमीलाई छुन सक्दिन । साबुन पानीले हात धुदाँ गीत गाउँदै हात धोयौं भयो भने मलाई अझै डर लाग्छ तिम्रो आत्मबल देखेर । तिमी गीत गाउँदा तिमीलाई मन पर्ने गीत, जन्म दिनको गीत, ए. बी. सी. डी. को गीत गाउन सक्छाैं । गीत गाउँदा १ देखि १० सम्म नम्बर भन्दै हात धुन सक्छाैँ ।
घरमा सेनिटाईजर भयो भने पनि लगाउन सक्छाैँ । जव हात सुख्खा हुन्छ तव तिमी खेल्न सक्छौं । रमाइलो गर्न सक्छौं । पढ्न सक्छौं ।
यदी तिमी घर भित्र बसिरहेको खण्डमा म तिम्रो घरमा आउन सक्दिन । धेरै घुम्ने, डुल्ने गरेमा तिमीले मलाई छिट्टै भेटाउन सक्छौं ।
बिश्वभर बिशेषज्ञहरु मेरो बिरुद्ध औषधी तयार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब घुम्ने, डुल्ने र रमाउन पाउँदिन जस्तो लागिरहेको छ । मलाई घुम्ने दिने वा नदिने तिम्रो हातमा छ ।
(म्यानुएला मोलिनाको कोभिड १९ सँग सम्बन्धित बालकथाको सम्पादित अंश)
जेएमसीको २२ औं सभा : क्याम्पसको वार्षिक बजेट साढे २० करोड
आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र २२, २०७७
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले मानित विश्वविद्यालयका लागि चाहिने भौतिक संरचना र जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध भएको जनाएका…
राजदूत दाहालसँग इक्यान कास्कीको अन्तरक्रिया
पोखरा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश दाहालसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । पोखरामा भएको…
भिमादमा विद्यालय बन्द नहुने
आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र १७, २०७७
दमौली । सरकारले वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताका कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने जनाए पनि भिमाद नगरपालिकाले भने नियमित रुपमा विद्यालय…